ကုန်ကြမ်း JW 642 (1416133-89-5) ပေးသွင်းhplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / JW 642
rating: အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် Tags: JW 642 ဝယ်ဖို့, JW 642, ရောင်းရန် JW 642, JW 642 ပေးသွင်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ JW 642 (1416133-89-5) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
ထိုကဲ့သို့သော 2-arachidonoyl က glycerol (2-AG က) အဖြစ် Endocannabinoids နှင့် arachidonoyl ethanolamide ဇီဝ cannabinoid receptors ၏ activation အပါအဝင် Synaptic ဖြစ်စဉ်များ၏နံပါတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုတက်ကြွ lipids ဖြစ်ကြသည်။ JW 642 အသီးသီး mouse ကို, ကြွက်, လူ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးအတွင်း 50, 7.6 နှင့် MAGL ၏ 14 nm forinhibition ၏ IC3.7 တန်ဖိုးများကိုဖော်ပြပေးသော monoacylglycerol lipase (MAGL) ၏အစွမ်းထက် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ ထိထိရောက်ရောက်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase လှုပ်ရှားမှုတားစီးဖို့အများကြီးပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားလိုအပ် MAGL များအတွက်ရွေးချယ် JW642is, (အသီးသီး mouse ကို, ကြွက်များအတွက် IC50s = 31, 14 နှင့် 20.6 μM, andhuman ဦးနှောက်အမြှေးပါး,) ။
II ကို။ JW 642 သံသရာ
4 - [(3-Phenoxyphenyl) methyl] -1-piperazinecarboxylic အက်ဆစ် 2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl) ethyl Ester
2 ။ JW 642 အသုံးပြုမှု:
ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများများတွင်ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက်ကျနော်တို့သိမ်းဆည်းထား JW 642be -20 ℃မှာ assupplied ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်တည်ငြိမ်ဖြစ်သင့်သည်။
JW 642 methyl acetate အတွက်အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ထောက်ပံ့နေသည်။ အဆိုပါအရည်ပျော်ပစ္စည်းကိုပြောင်းလဲရုံနိုက်ထရိုဂျင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့စီးအောက်ရှိ methyl acetate နှင့်ရွေးချယ်မှုချက်ချင်း addthe အရည်ပျော်ပစ္စည်းအငွေ့ပျံ။ အရည်ထိုကဲ့သို့သော asethanol, DMSO နှင့်အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူပြေတတ် dimethyl formamide ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသီးသီးအဆိုပါသည်ဤအရည်အတွက် JW 642 ၏နိုင်မှု isapproximately 13,5 နှင့် 11mg / ml ။
JW 642 aqueous ကြားခံအတွက်အနည်းငယ်သာပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ aqueousbuffers အတွက်အများဆုံးနိုင်မှုများအတွက် JW ၏အီသနောဖြေရှင်းချက် aqueous ကြားခံ ofchoice နှင့်အတူရောခံရ 642should ။ JW 642 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 0.3 တစ်နိုင်မှုတစ် 1 အတွက် / ml ကို mg ထားပါတယ်: အီသနော၏2ဖြေရှင်းချက်: PBS (pH ကို 7.2) ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြု. ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးထက်ပိုသောနေ့ရက်များအတွက် aqueous ဖြေရှင်းချက်သိုလှောင်အကြံပြုကြပါဘူး။
3.What JW 642 ၏သောက်သုံးသောပါသလဲ
100 MM မှ DMSO
100 MM မှအီသနော
တည်ငြိမ်မှုနှင့်ပျော်ဝင်အကြံဉာဏ်: တချို့ကဖြေရှင်းချက်ရရှိရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်နှင့် (တစ် 45-60 ° C မှရေရေချိုးအတွက်) လျင်မြန်စွာစိတျလှုပျရှားဖှယျ, Sonic သို့မဟုတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပူနွေးလာသဖြင့် beencouraged နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်မှုကိုရည်မှတ်သတင်းအချက်အလက်, အထူးသဖြင့်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခဲအစီရင်ခံခဲ့ပြီးအများဆုံးကိစ္စများတွင်သာယေဘုယျလမ်းညွှန်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စံအကြံပြုချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: အစိုင်အခဲ: ပေးသိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်တံဆိပ်အပေါ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်အဖြစ်နှင့်ဖလားကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ထား, ထုတ်ကုန်လက်ခံရရှိ၏နေ့စွဲကနေအထိ6လကြာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ Solutions: ကျနော်တို့ကိုတက်လုပ်နှင့်အတူတူပင်နေ့၌အသုံးပြုသင့်တခါပွငျဆငျစတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းနည်းများ, တင်းတင်းကျပ်ကျပ် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် vialsat သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် 1 month.Wherever ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်အတွင်းအသုံးပြုသောအတွက် aliquoted သိမ်းထားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
4.How JW 642 အလုပ်လုပ်တယ်?
JW 642 တစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC = 3.7 nm) ဖြစ်ပါသည်။ ဖက်တီးအက်ဆစ် amidehydrolase (IC = 1000 μM) ကျော် MAGL များအတွက် displays> 20.6-ခွံကိုရွေးချယ်ပါ။ အရှင်က၎င်း၏ဇီဝ function ကိုရပ်စဲ arachidonic အက်ဆစ်နှင့်က glycerol မှ 2-AG က၏ Hydrolysis တာဝန်ရှိသည် Monoacylglycerol lipase (MAGL) Isa serine hydrolase ။ Toxicological အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစေသောစေခြင်းငှါ: methyl Acetate - အဆိပ်သင့်မှာ Data: ခံတွင်း LD50 (ကြွက်):> 5,000 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; ခံတွင်း LD50 (ယုန်): 3,705 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; အရေပြား LD50 (ယုန်):> 5,000 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; ရှူရှိုက်မိပါ TCLO (လူ့): 15,000 မီလီဂရမ် / m3; methyl Acetate - ယားယံခြင်းမှာ Data: အရေပြား (ယုန်): 500 မီလီဂရမ် (24h) အပျော့စား, မျက်စိ (ယုန်): 100 မီလီဂရမ် (24h) အလယ်အလတ်။
I.Stability နှင့် reactivity ကို
အန္တရာယ်ရှိသောတုံ့ပြန်မှု၏ 5.3 ဖြစ်နိုင်ခြေ
5.4 အခြေအနေများအပူကိုရှောင်ရှားရန်, အစိုဓာတ်။
ခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ် / အယ်ကာလီ, အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချ / strong oxidising ။
ဘေးကင်းလုံခြုံကိုင်တွယ်ဘို့ 5.1 ကွိုတငျကာကှယျမှုမြား
လွတ်လပ်တဲ့စနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့လေနှင့်အတူတစ်ဓာတုအငွေ့ပါးပျဉ်းအတွက်သုံးပါ။ ရှူရှိုက်မိပါ, မျက်လုံးနဲ့အဆက်အသွယ်, အရေပြားနှင့်ရှောင်ကြဉ်ပါ
အဝတ်အစား။ မွမှေုနျ့နှငျ့ Aerosol ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်ဧရိယာ၌အသုံးပြုပါ။ စက်နှိုး၏ရင်းမြစ်များမှကွာထားပါ။ ကိုရှောင်ကြဉ်
မဆိုသဟဇာတမအပါအဝင်ဘေးကင်းလုံခြုံသိုလှောင်မှုအတွက် 5.2 အခြေအနေများ။
အေးမြကောင်းစွာလေဝင်လေထွက်ဧရိယာထဲမှာသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်ကနေကွာထားပါ။ တင်းကျပ်စွာအသုံးပြုမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီသည်အထိတံဆိပ်ခတ်ကွန်တိန်နာထားပါ။
အကြံပြုသိုလှောင်မှုအပူချိန်: -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ Store က
6.JW 642 ကုန်ကြမ်း Powder:
7.JW 642 ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
8.JW 642 စျေးကွက်:
9.Does JW 642 မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား?
ပစ္စည်းဟာချွဲအမြှေးပါးနှင့်အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှကိုစိတျဆိုးစေခြင်းငှါ, မွှန်, စားသုံးမိခြင်းသို့မဟုတ်အရေပြားစုပ်ယူမှုအားဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထိနမိဒ္ဓ ordizziness ဖြစ်ပေါ်စေမည်အကြောင်း, အသားအရေသို့မဟုတ်အသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုယားယံစေနိုင်ပါသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့အသားအရေခြောက်သွေ့သို့မဟုတ်လောင်သောအသံဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှု / ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု
9.1 ထိန်းချုပ်ရေး parameters တွေကို
အလုပ်ခွင်ထိန်းချုပ်မှု parameters တွေကိုနှင့်အတူ components
9.2 Exposure ထိန်းချုပ်မှု
ဘယ်မှာသက်ဆိုင်သောတစ်အငွေ့ပါးပျဉ်းအတွက်သုံးပါ။ သေချာ SDS ပုဒ်မ7အောက်တွင်ဖော်ပြထားအားလုံးအင်ဂျင်နီယာအတိုင်းအတာအရပျ၌ရှိကြ၏။
မျက်လုံး / မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
(374 နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်အသုံးပြုမှုကိုစံ BS EN 2003) သင့်လျော်သောဓာတုခံနိုင်ရည်လက်အိတ်ကိုသုံးပါ။ လက်အိတ်ဖြစ်သင့်
III ကို။ JW 642 HNMR
IV ။ AASraw ထံမှ JW 642 ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံး "JW 642" Be ပြန်ကြားချက် Cancel
Naltrexone HCL အမှုန့်